जम्मु कश्मीरमा पाकिस्तानी सेनाको गो*लि लागेर नेपाली गोर्खा सैनिक हवल्दारको नि*धन ! – Butwal Sandesh
जम्मु कश्मीरमा पाकिस्तानी सेनाको गो*लि लागेर नेपाली गोर्खा सैनिक हवल्दारको नि*धन !
काठमण्डू – भारत र पाकिस्तान दुवैले दाबी गरेको जम्मु कश्मीरको सीमा एक भारतीय सैनिक मा’रिएका छन् । नेपाली मूलका हवल्दार दीपक कार्की पाकिस्तानी सेनाको गो ली ला’गेर मा’रिएका हुन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमले पाकिस्तानी सेनाले शीतयु द्धको उल्लंघन गर्दै भारतीय सैनिक कार्की मा’रिएको जनाएका छन् । समाचारका अनुसार दिपक कार्की गुल्मी क्षत्रकोट ५, खर्ज्याङ निवासी श्री शलिकराम कार्कीका छोरा दिपक कार्कीको नि*धन भएको हो । उनको नि*धन भएपछि सिङ्गो गाउँ सोकमा डुबेको छ ।
चीनसँगै भारतको पाकिस्तानी सीमामा पनि त-नाव बढेको छ । दिनहुँजसो पाकिस्तानी आर्मीको गो ली ला’गेर एकजना भारतीय सैनिक मा’रिरहेका छन् । केहि दिन अघि मात्र भारत र चीनका सैनिकबीच गत हप्ता लद्दाखको गलवान घाटीमा भएको घ*टना बारे इन्डियन एक्सप्रेसको एक खबरका अनुसार मा;रिएका सैनिकको शरीरमा ग’म्भीर चो;ट थिए ।
पत्रिकाले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सैनिकको शरीरमा थुप्रै फ्रे क्चर पनि भएको बताएको छ । पत्रिकाका अनुसार गलवान घाटीमा भएको घ*टनामा भारतीय सैनिकले चिनियाँ सैनिकलाई क;डा जवाफ फर्काएका थिए । दुबै पक्षका सेनाबीच थुप्रै घण्टासम्म झ डप जारी रह्यो । उक्त घ*टनामा थुप्रै सैनिक नदीमा ख’सेको पत्रिकाले बताएको छ । स्रोतका अनुसार नदीमा ख;सेका र चिसोका कारण पनि थुप्रै सैनिकको नि*धन भएको थियो ।
भारतको चारै तिरको सिमानाका देशहरुबाट बढ्दो खतरा रोक्न भारतले केहि त्यस्तो कुटनीतिक कदम चालेको देखिन्न। भारितीय सैनिकहरु दिनप्रतिदिन यसरि नै मा*रिदै आइरहेका छन्। खास गरि गोर्खा सेनाको नाममा खोलिएको भारतीय गोर्खा पल्टनका सयौ नेपाली युवाहरुले अर्काको खातिर यसरि ज्या*न गु*माउनु परिरहेको छ। अर्काको देशको सिमाना रक्षार्थ खटिएका हजारौ नेपाली युवाहरुले अब एकदिन आफ्नै जन्मभूमि तर्फ पनि गोलि चलाउनु पर्ने दिन नजिकै आइरहेको देखिन्छ कालापानीको मु*द्धालाइ नजिकबाट नियालेर हेर्ने हो भने। त्यसैले, समय मै सचेत भै आफ्नो देश र जनताको बारेको केहि सकरात्मक कुरा सोच्ने कि सरकार !